8MM! iikhitshi ezi-2, amanqanaba ama-2, iidekhi ezi-3, iidokhi ezi-2!Kulala 18!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDennis
UDennis ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Siphumile kwitshaneli ephambili-indawo yokukhenkcela yamanzi-ityhubhu, i-ski, i-kayak kunye nebhodi yokubheqa!
Ngamanzi, singaphantsi kweemayile ezi-2 ngasechibini ukuya eCamden kwiLake, H. Toads, Shady Gators, Tap & Grill Brew Haus & Frankie & Louie's!
Ikhaya lethu lilungiselelwe iintsapho ezi-2+.
-Umgangatho ophezulu-amagumbi okulala ama-3, indawo ephezulu, iibhafu ezi-2, ikhitshi, indawo yokuhlala, indawo yokutyela kunye negumbi lokuhlamba impahla!
-Inqanaba elisezantsi-ikhitshi, amagumbi omdlalo, amagumbi okulala ama-3, i-1.5 yokuhlambela
- Sinedekhi ezi-3 kunye needokhi ezi-2.
Eli ayililo iLake lakho eliqhelekileyo lokurenta iholide yaseOzarks. Eli yayilikhaya lethu lesibini kude kube ngu-2019, ke uya kufumana uchuku lomntu kulo lonke. Ngoku sihlala echibini ixesha elipheleleyo, ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ukusuka eLanding, ngoko siyafumaneka ukuze sincede nangaliphi na ixesha.
Isilingi evuthelweyo enombono omangalisayo wechibi.
Unokutyhubhu kunye nokutyibiliza kwindawo yethu yeFABULOUS. Siphumile kumjelo omkhulu, ngoko ke amanzi azolile. Iidokhi zethu azishukumi njengezobuchwephesha bezitishi eziphambili!
Ngamanzi, singaphantsi kweemayile ezi-2 ngasechibini ukuya eCamden kwiLake, iAlhonna's, H. Toads, Shady Gators, Tap and Grill Lakeside Brew Haus AND Frankie and Louie's!
Ikhaya lethu lineseti egqibeleleyo yeentsapho ezimbini okanye ngaphezulu. Nceda uqaphele ukuba asivumeli iindwendwe ezingaphezu kwe-18.
-Umgangatho ophezulu unamagumbi okulala ama-3 (ibhedi enye yenkosi enkosini enebhafu eqhotyoshelweyo kunye namagumbi okulala amabini aneebhedi zendlovukazi) kunye negumbi eliphezulu elineebhedi ezimbini ezingamawele kunye nebhedi ephindwe kabini, iibhafu ezimbini ezigcweleyo (enye kwinkosi) kunye nendawo yokuhlala enemigangatho kunye 2 flat screen TVs, ikhitshi epheleleyo kunye yokutyela / indawo yokutyela 16 kunye negumbi enkulu yokuhlamba! Ewonke amagumbi okulala ama-3 kunye neloft, alala ali-10 kweli nqanaba.
-Umgangatho ongezantsi ubonisa ikhitshi eligcweleyo (ngaphantsi komatshini wokuhlambela izitya), indawo yokuhlala abantu abayi-12 - itafile yokutyela amakhadi, iitafile zebar kunye nezitulo, itafile entsha yepool, itafile yefoosball kunye neTV yescreen esicaba, igumbi leTV elahlukileyo NENYE ibha, imicrowave. kunye nefriji encinci kunye ne-daybed ene-trundle (iibhedi ezimbini zamawele), kunye namagumbi okulala amathathu (amabini aneebhedi zendlovukazi kunye negumbi elinye lokulala elikhulu elinebhedi yenkosi kunye nebhafu ye-1/2 eqhotyoshelweyo), kunye negumbi lokuhlambela lesithathu elinendawo yokuhlambela. Amagumbi okulala ayi-4 ewonke, alala ayi-8 kweli nqanaba.
- ENTSHA NGEXESHA LEHLOBO LIKA-2018 - Onke amashiti, imiqamelo, iingubo zokulala, iipali zoomatrasi kunye neeqhiya zazo zonke iibhedi; Iikhushini kuzo zonke izihlalo zangaphandle; Itafile yephuli kunye neempawu; Itafile yeFoosball; Iibhedi ezikumgangatho ophambili, izitulo zesikhumba, itafile yekofu, zonke izibane; Itafile yokutyela kunye nezihlalo / ibhentshi; Ifenitshala entsha yegumbi lokulala
- ENTSHA NGEXESHA lika-2019 - ipeyinti yonke yangaphakathi; iifeni zesilingi kuwo WONKE amagumbi; ikhaphethi kuwo onke amagumbi okulala kunye nezitepsi; umgangatho ongundoqo wokulungiswa kwekhitshi - izixhobo zokubala zegranite, isitovu segesi, zonke izixhobo zombane ezingenasici, izitulo ezintsha zokubala; I-grill yamalahle kunye nezixhobo; Ukulungiswa kwekhitshi elikumgangatho ophantsi - ifriji ehlaziyiweyo, isitovu kunye nempompo; Izifudumezi zamanzi ezibini ezitsha; isixhobo esitsha sokuthambisa amanzi; iziko elitsha kunye ne-air conditioner !!!
- ENTSHA NGEXESHA LAMA-2020 - Kutshintshwe zonke iiquilts kunye neelinen ngeelinen zemicrofiber kunye neengubo (ezi zihlanjwa emva kokuphuma kweendwendwe NGALUNYE); Ukongezwa kwebhedi ephindwe kabini kwigumbi eliphezulu elineebhedi ezingamawele.
- ENTSHA NGEXESHA lika-2021 - Ukuhlaziya umgangatho ophambili wokuhlambela kunye nenqanaba eliphambili lokuhlambela okwabelwana ngalo; uthenge zonke iitawuli ezintsha zokuhlambela, iitawuli zezandla namalaphu okuhlamba; itafile entsha yokutya kunye nezitulo kwinqanaba eliphambili.
- Sinemigangatho EZINTATHU ezijonge echibini.
- Idesika enye encinci ekhitshini eneveranda ekhuselweyo yepati encinci yabane.
- Kukho i-charcoal grill ngaphandle kwekhitshi.
-Idesika enkulu ukusuka kwigumbi lomdlalo elisezantsi elinendawo yokutyela ye-12.
- Idekhi yeMartini
- Sineedokhi eziZIMBINI.
-Iqula elinye lephenyane lakho kunye ne-jet skis. Asinanto yokunyusa isikhephe.
- Idokhi yepati eneendawo zokuhlala, ifriji encinci, izitulo zelounge, iitafile nezitulo, idokhi yePWC kunye nesilayidi!
Ukupaka iimoto ezi-6.
Nceda uqaphele ukuba asimvumeli umntu obhukishayo/umntu onoxanduva lokubhukisha abengaphantsi kweminyaka engama-25 ubudala.
Indawo esihlala kuyo ibandakanya amakhaya arentwayo ngeeholide kunye namakhaya abantu abahlala apha unyaka wonke. Sihlala kumgama oziikhilomitha ezi-6 (ngamanzi) kunye nemizuzu engama-25 ngemoto.
Umbuki zindwendwe ngu- Dennis
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$850